Howgallada Farsamo ee Gaarka ah (Special Tactical Operations) | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Maxay Farqiga U Dhaxeeyo Maqalka Iyo Dhagaysiga?
Waa Maxay Cudurka Macaanka Iyo Caawaqib Xumada Ka Dhalan Karto?
Miski Cabdinuur Salal, February 4, 2019
Waa Maxay Yirridka iyo Calaamadaha Lagu Garan Karo?
Maxamed Cabdirisaaq Diriye — June 15, 2020
Halganka ka dhex aloosan nidaam meel ka jira iyo mucaaradka hubaysan ee ka soo horjeeda, wuxuu unkay hawlgallo gaar ah maaddaama dagaal toos lagu kala adag yahay. Hawlgalada se laguma kala adka.
Waxaa jira qorshe gaar ah oo loogu yeero howlgallada farsamo ee khaas ka ah(Special Tactical Operations), waa hawl khaas ah oo ay qabtaan dad gaar ah, oo lagu soo xushay tayo gooni ah. Waxay isugu jiraan shirqoolid, qarxin, burburin, weerarid, af-duubid, qabsasho iyo mid looga golleeyahay siidayn maxaabiis.
Shaqsiyaadka fulinaya hawlgalkaan waxaa lagu soo xushaa muuqaalka iyo dagaalyahannimada, aqoonta ay hubka u leeyihiin, dhiifoonnimada, garashada, awoodda sir-qarinta, degganaanta, go’aan qaadashada, dulqaadka, dhiiranaanta iyo inaan laga aqoon meesha uu wax ka fulinayo.
Hubka loo isticmaalo hawlgalladaan waxay u badan yihiin, waxyaabah qarxa, hubka fudud, middiyo ama sun. Waxaa fuliyaa hawlgalladaan si loo muujiyo awoodda ururka, si loo diro farriin baqdin galin iyo si loo helo shaqaale cusub. Si loo xoojiyo ka guul gaarka hawlgalladaan, waxaa loo baahan yahay qorshe amni(security plan) kaas oo tiirarka u dhaabaya hawgallada farsamo ee gaarka ah. Qorshaha amni ee gaar ah wuxuu leeyahay saddex waji oo kala ah:
Si looga hortago fashil ku yimaada hawlgallada waa in saddex daas waji si taxadar badan oo qoto-dheer loo falanqeeyaa oo loo qorsheeyaa.
Waji koowaad waa la baaraa xogta qof ama kooxda la raadsanayo, waxay xogtu isugu jirta, magaca, da’da, deegaanka, jagada, shaqada. Xilliga uu shaqada ka soo baxo, xilliga uu aado, waddooyinka uu maro, waqtigiisa firaaqada waxa uu qabto, saaxiibadiis iyo meesha ay dagganyihiin, gaariga uu wato, xaaskiisa iyo carruurtiisa, shaqada xaaskiisa, iskuulka ay carruurtiisu dhigato, dhaktarkiisa, meelaha uu ka dukaamaysto, guriiga albaabada laga baxo ama laga soo galo, waddooyinka u dhow, hubka uu wato ama waardiyaha la socda iyo tiradooda.
Waxaa kale oo baaritaan iyo dabo-gal lagu samayn goobaha kale ee uu tago ama uu fariisto. Haddii taargadku uu yahay meel, sidoo kale waxaa lasoo aruurin xogaha muhiimka ah sida: baabuurta meesha marta iyo laamaha amniga cidda meesha ka aag-dhow.
Markii xogta qofka ama taargadka lasoo xaqiijiyo lana hubiyo, waxaa ku xiga wajiga qorshaynta hawlgalka. Waana waji kale oo aad muhiim u ah. Taliyaha madaxda u ah kooxda ama shaqsiga fulinaya hawshan waa inuu taxadar gooni u yeeshaa: hubka loo baahanyahay, shaqsiyaadka hawshan fulinkara, diyaarinta qorshe baddiil ah(alternative plan), waqtiga, taargadka weerarka, kulanka fuliyayaasha hawlgalka iyo caqabadaha kooxda soo wajihi kara. Taliyuhu wuxuu qorshaha la wadaagayaa madaxda kale(taliyayaasha kale) go’aan kama danbays ah ayaa ay hoosta ka wada xariiqayaan.
Fulintu waa wajiga u danbeeya qorshaha. Wuxuu leeyahay labo waji, waana fulinta ka hor iyo ka dib. Dadka qorshaha fulinaya waa in ay yihiin dad ku habboon muuqaal ahaan iyo maan ahaanba. Fulinta ka hor waxaa loo baahanyahay in dadka qorshaha fulinaya ay yihiim dad siman awood ahaan, hubka waa in la keenaa goobta qorshaha laga fulinayo(dad gaar ah ayaa u qaybsan hub keenidda). Hubka la isticmaalayo waa in la soo tijaabiyo.
Qofka ama kooxda qorshaha fulinaya waa in muuqaalka(dharka) badalan karaa ka dir fulinta(waa in goob u diyaarsantahay). Waqtiga iyo goobtuba waa in ay ku habboonyihiin fulinta qorshaha. Haddii bistoolad ama qori la isticmaalayo waa la sii kongareeyaa(la sii raaciyaa xabadda). Waji labaad oo ah fulinta ka din; waxaa la falanqeeyaa hawlgalkii dhan dheefta iyo faa’iido darrada. Qofkasta oo qayb qaatay hawlgalka waxaa la qiimeeyaa shaqadii loo diray iyo sida uu uga soo baxay.
Dadkii si wanaagsan uga soo baxay wixii loo igmaday waa la abaal mariyaa. Shaqsiyaadka gaar ah oo dowladdu raadinayso waa la qariyaa ama waddan kale baa loo diraa. Waxaa la gubaa sawirada, waraaqaha iyo maababka la xiriiray hawlgalkii. Ugu danbayn waxaa la isku dayaa in meeshii dilka ama hawsha lagu fuliyey in aan wax caddayn ah looga soo tagin.
Tags: Howgallada Farsamo ee Gaarka ah (Special Tactical Operations)
Next post "Waan ku nafisay inaan wax ka qoro kufsigi la ii geystay" - Michella Koela
Previous post Tusaha kalgalka